အစွန်းရောက်ခဲဖွယ်စားဖွယ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအထူးအခါသမယများအတွက်ဆင်မြန်းကောက်။ သို့သော်ချောပုံရိပ်ကိုကောင်းစွာ-ရွေးကောက်တော်မူခြင်းမရှိဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး ဖိနပ် , လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ဆံပင်ပုံစံတွေ။ အရေးအပါဆုံး accessories များတစ်ခုမှာအငူညနပေိုငျးစားဆင်ယင်အပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားများဤအကြောင်းအရာချမ်းညဥ့်ပူနွေးလာသည်နှင့်ပုံရိပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။
တစ်ဦးဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်အခါအမှားတွေကိုရှောင်ရှားရန်, စားဆင်ယင်နှင့်အတူကအတူတကွကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာမော်ဒယ် Cape ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ဂန္စတိုင်နီးစပ်သူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်မတ်မတ်ကိုက်ညီဖို့ဝတ်လုံကိုကောက်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ စားဆင်ယင်အရောင်နဲ့ texture ကနေအသီးသီးစမ်းသပ်နှင့် Cape တူသောရှော့ခ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေ, အဘို့။ universal အဆိုပါအငူစားဆင်ယင်မှပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။
ပါးလွှာသောကြိုးနှင့်အတူအနိမ့်လည်ပင်းစားဆင်ယင်မှုအတွက်တစ်ရင်ခွင်ရွေးချယ်ခြင်း, သင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရသာနဲ့အထူး status ကိုရယူပါ။ နောက်ကျောခြေထောက်, ရင်ဘတ်: ဥပဒေများဒီဇိုင်းအရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပွင့်လင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစွန့်ခွာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင်အပိုစွဲချက်အများအပြားအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအားလုံးစားဆင်ယင်၏မော်ဒယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးလူကြိုက်များဝအောက်ပါလက်ခံရရှိခဲ့သည်:
Bolero ။ အင်္ကျီလက်နှင့်အတူဤတိုတောင်းသောဂျာကင်အင်္ကျီ။ ဒါဟာဖြောင့်ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်ရန် သာ. ကောင်း၏။ ကောင်းပြီ, အ bolero အခါစားဆင်ယင်နှင့်တူညီသောပစ္စည်းကို လုပ်. , သို့မဟုတ်အရောင်ထဲမှာအတူတိုက်ဆိုင်။ ဇာနှင့်အတူပါသို့မဟုတ်ငန်းရဲ့နှိမ့်ချ၏ပုံစံမျိုးနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားအကျီ။
ညနေပိုင်းတွင်စားဆင်ယင်အပေါ်အငူထိုးပြီး။ ဒါဟာကြော့ shawl, ပဝါသို့မဟုတ် tippet နိုင်ပါတယ်။ ကြော့ထိုးပြီး Cape openwork ဇာထိုးနည်းကိုကွပ်မျက်ခံရပြီးလှပသောမြိတ်၏အစွန်းပေါ်မှာအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
Neckpiece ။ ဤသည်ပဝါအမွေးသို့မဟုတ်အမွေးအတောင်။ ဘိုအာလည်ပင်းပတ်ရစ်သို့မဟုတ်သူ၏ပခုံးပေါ်မှာပစ်။ ဒါဟာခေတ်မှီထုံးစံ၌နောက်ဆုံးထိဖြစ်လာ, ထိထိရောက်ရောက်စားဆင်ယင်ဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာအငူအဝတ်အစားကျော်တဦးတည်းလက်မောင်းနဲ့ပေါက်, အင်္ကျီလက်နှင့်အတူသူတို့ကိုမရှိဘဲစားဆင်ယင်အပေါ်ဝတ်ဆင်။
Manto ။ တိုတောင်းတဲ့သားမွေးကုတ်အင်္ကျီဆင်တူသည့်ကိပ်။ ဒါဟာ trapezoidal silhouette ရှိပါတယ်နှင့်အင်္ကျီလက်ကိုဆင်းကြရပြီ။ Manto အတော်လေးနွေးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအေးစိမ့်သောညဦးယံ၌ဆင်မြန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Cape ဒါကြောင့်သူတို့ပင်ထုတ်လုပ်သောဒီဇိုင်နာများကြိုက်တယ် ညနပေိုငျးစားဆင်ယင် ချုပ်တစ်ဦး chiffon အငူနှင့်အတူ။ ဒါဟာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ရှည်လျားရှာဖွေမှုမှအမျိုးသမီးများကိုသက်သာ။
နွေရာသီအင်္ကျီ - အရှိဆုံးဖက်ရှင်စတိုင်များနှင့်အရောင်များ
ဂျင်းဘောင်းဘီ 7/8 - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့စတိုင်ပုံရိပ်တွေဖန်တီးနည်း
တာရှည်ဆွယ်တာအင်္ကျီ - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
ဆောင်းရာသီဖိနပ် - ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုရွေးချယ်သနည်း
အရူးအလှတရား-လမ်းကြောင်းသစ်လာမည့်နှစ်တွင်: ထူ ထပ်. နှုတ်ခမ်း!
အရိုးနှင့်အဆစ်များတွင်ခဲ - အကြောင်းရင်းများ
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ငါးပေါ်ဘီယာ Battery ကို
Anorexia nervosa မီနှင့်ပြီးနောက်: ရောဂါအနိုင်ယူဖို့စီမံသူတွေကို!
တရုတ်ကြက်သွန် - အဆစ်များ၏ကုသမှု
လေ့ကျင့်ခန်း "Birch" - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး